Eksaody 20 - Ny Baiboly
Eksaody toko 20
17Tsy hitsiriritra ny tranon'ny namanao hianao, tsy hitsiriritra ny vadin'ny namanao, na ny ankizilahiny na ny ankizivaviny, na ny ombiny na ny ampondrany, na inona na inona amin'ny zavatry ny namanao.
18Ren'ny olona rehetra ny kotroka sy ny feon'ny trompetra, hitany ny lelafo sy ny tendrombohitra nivoa-tsetroka, ka nangovitra sy nijanona teny lavitra teny izy ireo nony nahita izany. 19Ary hoy izy tamin'i Moizy: Hianao ihany no aoka hiteny aminay dia hohenoinay; fa aoka tsy ho Andriamanitra no hiteny aminay, fandrao dia maty izahay. 20Fa hoy Moizy tamin'ny vahoaka: Aza matahotra hianareo fa ny hizaha toetra anareo no nahatongavan'Andriamanitra, ka ho eo aminareo ny fahatahorana azy, mba tsy hanotanareo. 21Dia nijanona teny lavitra eny ihany ny vahoaka, fa Moizy no nanatona ny rahona izay nisy an'Andriamanitra.
22Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Hilaza amin'ny zanak'Israely hianao hanao hoe: Efa nahita hianareo izay, fa niteny taminareo aho tany an-danitra. 23Koa aza manao andriamanitra volafotsy na andriamanitra volamena eo an-daniko hianareo. 24Manorena otely tany ho ahy, ka eo amboniny no hanoloranao ny sorona doranao, ny sorom-pihavananao, ny ondrinao sy ny ombinao. Hanatona anao sy hitahy anao aho amin'ny toerana rehetra hanaovako izay hahatsiarovana ny anarako. 25Raha manorina otely vato ho ahy hianao, aza vato voapaika no harafitra, fa raha manainga ny fandrakao amin'ny vato hianao dia hahatonga azy ho tsy azo atao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. 26Aza asianao ambaratonga hiakarana ny oteliko, mba tsy hiseho eo ny fitanjahanao. >